Makuki mutemo ›Blog de Juan Herranz
Mukutevedzera zvakatemwa zvechinyorwa 22.2 cheLaw 34/2002, yaChikunguru 11, paSevhisi yeRuzivo rweSosaiti uye Electronic Commerce, Muridzi anokuzivisa kuti webhusaiti ino inoshandisa makuki, pamwe nemutemo wayo wekuunganidza uye mabatirwo awo. .
Cookie ifaira diki riri nyore rinotumirwa pamwe chete nemapeji ewebhusaiti ino uye kuti browser yako Makuki ifaira rinodhaunirodwa kucomputer yako paunopinda mamwe mapeji ewebhu. Makuki anobvumira peji rewebhu, pakati pezvimwe zvinhu, kuchengetedza uye kutora ruzivo nezve maitiro ako ekubhurawuza uye, zvichienderana neruzivo rwaainarwo uye mashandisiro aunoita midziyo yako, anogona kushandiswa kukuziva iwe.
3. Mhando dzekiki dzakashandiswa
Saiti www.juanherranz.com inoshandisa anotevera marudzi emakuki:
Kuongorora makuki: Ndidzo idzo, dzinorapwa zvakanaka newebsite kana nevanhu vechitatu, dzinobvumira huwandu hwevashandisi kuverengerwa uye nekudaro vanoita chiyero uye kuongorora kwekushandisa kunoitwa nevashandisi vewebhusaiti. Kuti uite izvi, kufamba kwaunoita pane ino webhusaiti kunoongororwa kuitira kuti igadzirise.
Chechitatu-bato makuki: Iyi webhusaiti inoshandisa Google Adsense masevhisi anogona kuisa makuki anoshandira zvinangwa zvekushambadzira.
4.Kumisikidza, kumisa nekubvisa makuki
Unogona kugamuchira, kuvhara kana kudzima makuki akaiswa pakombuta yako nekugadzirisa sarudzo dzebrowser yako. Mumalink anotevera unowana mirairo yekugonesa kana kudzima makuki mumabhurawuza akajairika.
5. Yambiro pamusoro pekudzima makuki
Unogona kudzima nekuvharisa makuki kubva pawebhusaiti ino, asi chikamu chesaiti hachizoshande nemazvo kana kunaka kwayo kunogona kukanganisa.